XAGEE LOOGU SOO HAGAAGAA AIR-SOMALIA ?
Dubai, 9th July 2001
Tan iyo markii uu burburay maamulkii Dawladda muddo laga joogo 11 sano, waxaa dalka Soomaaliyeed ka abuurmay shirkado iyo Xafiisyo khaas ah ( private Institutions ) oo si gaar ah ugu fududeeya dadweynaha adeegyada guud , iyagoo iyana ka macaasha dhankooda.
Waxaa shirkadahaa ka mid ah kuwa ka shaqeeya :-
1) Hawlaha Xawaaladda Lacagta ,
2) Isgaarsiinta Telefoonada iwl.
3) Beec-mushtarka guud ,
4) Daryeelka Caafimaadka iyo Shey-baarada .
5) Warbaahinta ( telefishinada iyo Jaraa'idka ),
6) Gaadiidka Hawada , waxaana hoos yimaada Dayuuradaha gaarka ah .
Hadaba Shirkadda Dayaaradda ee Air-Somalia oo ka mid ah shirkadaha ku hawlan gaadiidka cirka ayaa beryahan danbe dadweynaha macaamiisha u ah ay kala kulmayeen dhibaatooyin la xiriira sidii ay u ogaan lahaayeen garoonka ay ka soo dageyso .
Waxaa tusaale nooga filan duulimaadkii xalay ( 8/7/2001) laga filayay inuu ka soo dago garoonka dayaaradaha ee Dubai todobada fiidnimo ( 19:00 hrs), oo markii danbana la sheegay inay dayaaraddu imaatinkeeda dib ugu dhacaday (Expected at 23:30 hrs) in dadweynihii u yimid inay soo dhoweeyaan ehelkooda duulimaadka la socda oo qaarkood ka yimid meelo fogfog sida Abu-Dhabi, Al-Ceyn, Bidca-Zayid iyo Fujeirah aan haba yaraatee laga siin Xafiiska Shirkadda ee ku yaal Dubai wax wargelin ah .
Sidaasna ay nasiibdarro ku dhacday in Dayuuradii ay ka sugayeen Dubai inay cagadhigatay Sharjah , oo markaa ay dantu ku qasabtay inay mar kale halkaa aadaan, iyagoo inta badan leh dawaam shaqo .
Waxaa is-weydiin leh : Xagee loogu soo hagaagaa Air-Somalia .
Ma Dubai baa mise Sharjah ? Sow ma haboona inay yeeshaan waqti xadidan (Arrival Time) iyo garoon loogu soo hagaago ?